Shakespeare: ohlwini. Uilyam Shekspir: lokusungula
Singasho kugcwale umlomo ukuthi lesi indoda useshintshe emhlabeni, isimo sengqondo, bezibona, isimo sengqondo ukuze yobuciko beyibo. Uilyam Shekspir, omisebenzi yakhe kufundvwe kukharikhulamu esikoleni, kwaba ubuhlakani kweqiniso. kudlala yakhe netinkondlo kungenziwa ngokuthi encyclopedia kweqiniso yenza ubuhlobo babantu, uhlobo nesibuko wokuphila, kugqame unobuthakathaka nezici ezinhle zabantu.
Shakespeare - kungcono umnikelo umxhwele izincwadi emhlabeni. Phakathi nokuphila kwakhe, i-British okukhulu wadala nesikhombisa amahlaya, izigemegeme nanye, ilandisa idazini, izinkondlo eziyisihlanu futhi yizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisihlanu nane sonnets. Kazi nezikhonzi zabo, izinkinga ezichazwe kuzo, ehambisana kuze kube yilolu suku. Ngisho izazi eziningi wemidlalo abakwazi ukunikeza impendulo, ngekhulu leshumi nesithupha, umuntu obaluliwe angashushiswa ukudala imisebenzi ezithinta zonke izizukulwane. Ngisho hypothesized ukuthi imisebenzi abo angalotshwanga ngomuntu oyedwa, kodwa iqembu elithile abalobi, kodwa ngaphansi mbumbulu. Kodwa iqiniso hhayi kusungulwa okwamanje.
Shakespeare, omisebenzi yakhe bayathandeka kahle ngabaningi, eziningi eziyimfihlakalo uyasala namaqiniso angokomlando ezimbalwa kakhulu. Kukholakala ukuthi wazalwa eduze Birmingham, emzini Stratford-upon-Avon e 1564. Uyise wethuka wahlanganyela ukuhweba futhi kwaba elichumayo idolobha ohlala. Kodwa imibuzo nge UWilliam izincwadi ezincane namasiko kwaxoxwa: kwakungeyona ngaleso sikhathi endaweni kungaba kunikela nokuthuthukisa amathalente.
Umfana waya esikoleni khulula at nesishiyagalombili washada (babe) intombazane ocebile, yena wayemdala kunezingane kuye iminyaka eyisishiyagalombili. Ngokusobala, ukuphila komkhaya akakuthandanga uShakespeare, ngakho ahlangana khona neqembu lomculo zulazulani futhi wathuthela eLondon. Kodwa ukuze ube kumdlali Akaphindanga inhlanhla, ngakho wabhala izinkondlo behlonipha abantu abanethonya, wakhonza amahhashi izivakashi ezicebile yamabhayisikobho, wasebenza prompter, kokuphothula play. Imisebenzi yokuqala kaShakespeare uvele lapho eseneminyaka engama-25 ubudala. Khona-ke waloba kaningi. Bakhululwa futhi kuphumelele. Ngo 1599, bangakunaki iqembu abaculi, futhi kuhlanganise uShakespeare, "Globus" enkundleni edumile yemidlalo yaseshashalazini lakhiwa. Kwasebenza njengoba umlobi wemidlalo yaseshashalazini kanye ngokuzikhandla.
Shakespeare ngisho ezahlukene kusukela amadrama bendabuko kanye namahlaya ethelevishini. sici yabo esiwuphawu kwaba okuqukethwe ezijulile, khona usongo olushintsha abantu. William wabonisa indlela ongaphakeme ungawela indoda futhi muhle ngaphansi kwezimo kanye, Ngakolunye uhlangothi, indlela yokwenza izenzo ezinkulu amashinga eziyihlazo. Wemidlalo wenza izinhlamvu yakubonisa uhlamvu kancane kancane, njengoba indaba iqhubeka futhi izilaleli - ukuzwelana izinhlamvu, ukubukela yesehlakalo. Futhi Shakespeare libhekene imizwelo eziphakeme zokuziphatha.
Akumangalisi wayeyisazi idrama phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe bancishwa imali abalobi abaningi njengoba umphakathi befuna kanjalo umsebenzi wakhe. Waphendula izidingo funa - wabhala kudlala entsha, outplayed izindaba lasendulo, wasebenzisa izincwadi zomlando. Impumelelo uWilliam ethulwa inhlalakahle, ngisho ijazi wekuvana izingalo. Washona, njengoba kukholelwa kanjalo ngokuvamile, ngemva idili merry behlonipha lwakhe lokuzalwa kumbuthano enobungane.
Asikwazi kulesi sihloko kubala yonke imisebenzi komkhulu omlobi wemidlalo oyiNgisi,. Kodwa thina ukubalula imisebenzi edume kunazo kaShakespeare. Uhlu simiswe ngalendlela lelandzelako:
"Romeo and Juliet".
"Midsummer Ebusuku IPHUPHO."
"I-Merchant of Venice."
"Ado Okuningi Mayelana Lutho."
"Madoda Amabili Verona."
Lezi zingcezu ezikhona repertoire yanoma yimuphi yaseshashalazini self-ukuhlonipha. Futhi-ke, uwuchaze zwi abadumile, singase sithi kungcono umlingisi abampofu, ongenayo dream ukudlala Hamlet, okungukuthi actress ezimbi, ongafuni ukudlala Juliet.
Ukuze noma cha ukuba?
KaShakespeare "Hamlet" - omunye bhá, anokuqonda kakhulu. Isithombe kwesikhulu Danish ubakhathalela ngokujulile, futhi umbuzo walo wakudala sizodingida imibuzo ngempilo yakhe. Kulabo abangenzanga ukufunda okufushane umnyuziki nhlekelele, tshela isifinyezo. Umdlalo iqala obhekwe Danish amakhosi castle isipoki. Ahlangana nge Hamlet futhi emtshela ukuthi inkosi akazange afe ukufa yemvelo. It kuvela ukuthi umphefumulo uyise ivele ifune yokuziphindiselela - sombulali uKlawudiyu hhayi kuphela wathatha umfazi yenkosi ngasekupheleni, kodwa futhi okwakufanele abe inkosi. Efuna nithole ukuba yiqiniso kwale ndaba. umbono amazwi ebusuku, isikhulu ozishaya uhlanya, futhi umema abaculi ezulazulayo ithempeli isiteji nhlekelele. UKlawudiyu ekhishwe asabela ngayo, futhi Hamlet enquma okuziphindiselela. Ayenazo ngabathile esigodlweni zamenza, sokukhaphela ozithandayo nabangane wangaphambili ukwenza ePrince umphindiseli ngaphandle inhliziyo. Uwoyela ubulala abanye babo, ukuzivikela, kodwa ubulawa umzalwane inkemba Ophelia efile. Ekupheleni bonke bayafa: futhi uKlawudiyu, aqamba amanga wathatha isihlalo sobukhosi, futhi ongumama beliphuza iwayini anobuthi, umyeni, olungiselwe Hamlet, kanye Prince, futhi umphikisi wakhe, Laertes. Shakespeare, omisebenzi yakhe bathinteka izinyembezi, echazwe inkinga hhayi kuphela e-Denmark. Kodwa umhlaba wonke, amakhosi ohlanga lezinceku ngokukhethekile.
Inhlekelele ye abathandi ezimbili
KaShakespeare "Romeo and Juliet" - indaba ethinta inhliziyo ngabantu ababili abasha abakulungele zizinikele ukuze nomunye sakhe esikhethiwe. Lena indaba ezilwayo imikhaya, elingazange bavumele izingane zabo ukuba zibe ndawonye, ukuze sijabule. Kepha abantwana bakwa-ezilwayo ezicukuthwaneni Awunandaba imithetho, banquma ukuba ndawonye. emihlanganweni yabo ngimnene futhi enemizwa ejulile. Kodwa wathola umkhwenyana abazali bakhe abatshelwa ukulungiselela umshado. Laba bameleli be-sekusuke isidumo esitaladini imindeni emibili ayelwa wabulala umfowabo UJuliet Romeo kubhekwa umbulali. Umbusi ufuna ukukuthumela lowo okonile ezindleleni eziphumela ngaphandle komuzi. Abantu abasha ukusiza indela futhi umhlengikazi othile, kodwa musa okuxoxwe ngokugcwele yonke imininingwane beqa. Ngenxa yalokho, Juliet aphuze Potion, okuyinto luwele ukucobeka. Romeo futhi ukholelwa othandekayo kwabafileyo neziphuzo ushevu lakhe Crypt wakhe. Lapho evuka, yena ubulala yena nge Man angababulali. Montagues futhi Capulets kuthiwa sesibuyisene ulilela izingane zabo.
Kodwa wabhala Uilyam Shekspir nezinye imisebenzi. Kuyinto comedy funny ukumphakamisa kwemizwelo, ukukhanya futhi ephapheme. Bathi ukuxoxa abantu, nakuba eyaziwa, kodwa labo abangekho alien uthando, ugqozi, isifiso sokuphila. Google ngamagama, kulungise ukungaqondani kahle, flukes kuholele heroes kuya Ukuphela bajabule. Uma udlala futhi kukhona ukudabuka, kunjalo nje kuhlala isikhashana, ngakho ukugcizelela okumatasa onamileyo enkundleni.
Sonnets we ubuhlakani omkhulu futhi original, egcwele ukucabanga okujulile, imizwa, imizwelo. Amavesi kumbhali uphendukela umngane, bathandekayo, bayalila ngaphandle, futhi uyathokoza emhlanganweni, akayijabulelanga. Ulimi ekhethekile zomculo, izimpawu, futhi izithombe ukwakha isithombe utalagu. Ngokuthakazelisayo, iningi sonnets Shakespeare libhekisela indoda, mhlawumbe ukuze Genri Rizli, Earl of Southampton, le ongumvikeli wemidlalo. Futhi ngaleso sikhathi, emisebenzini kamuva, kukhona owesifazane abanebala elinsundu, ejokeni elibuhlungu.
esikhundleni isiphetho sendaba
umuntu ngamunye ayeyoba nakho ukufunda okungenani ukuhumusha, kodwa konke okuqukethwe imisebenzi edume kunazo uShakespeare, ukuqinisekisa ukuthi wayeyisazi enkulu of the Prophet possessed ikhono, njengoba bakwazi ukuthola inkinga, ngisho emphakathini wanamuhla. Wayengumuntu wamazwe komphefumulo womuntu, ukuqaphela izinzuzo zabo kanye nebubi, baphokophelele ushintsho. Aint it indawo okuyiwa yobuciko amakhosi ezinkulu?
Ngiyabonga uthisha incwadi, isipho sakho abafundi esizayo
Narcissus-indoda, noma engenakulinganiswa self-uthando. Narcissus Narcissist: Inani phraseologism
Izinhlamvu main play, AN "Ukuduma" Ostrovsky sika. Izici uTikhon ( "Ukuduma")
Isenzakalo esidume kunazo zonke izingcaphuno uthando
Zezibani - ikhandlela enkulu
Uyini uhlelo izingcaphuno? Lena sokuthi imisebenzi ezimele!
Plums: nezinhlobonhlobo for emaphakathi neRussia
"Yiba" iphilisi: yokusetshenziswa, izinkomba, analogs
I-Analog "Teoradex" eshibhile. "I-Tevrodex" (amaconsi eso): imfundo, incazelo
Izici Chatsky: Abantu abanjani abahluleli?
Hotel Grand iziLwandle Hostmark kuyona, Hurghada, Egypt: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Uboya ezinde - charm nangobuciko
Calcium gluconate - yokusetshenziswa
Osonhlalakahle ukuba bathuthukise amakhono abo
Umqulu webhayisikili ulula futhi uyashesha. Iresiphi yokupheka